Ku beddel faylasha ku jirta Mashruuca AutoCAD / Microstation - Geofumadas
Waa wax caadi ah in la helo baahida loo qabo in lagu badalo tiro badan oo faylasha ah oo badan:
Waxaan helnaa faylasha mashruuca 45 ee qaabka AutoCAD 20112. Waan ognahay in faylashadani lagu akhrisan karo AutoCAD 2010 iyo 2011 laakiin haddii kombiyuutarka meesha ay ku socdaan waxaa kaliya oo leh AutoCAD 2008 waxaan u baahanahay inaan bedelno.
Waxaan gudbinaynaa faylasha 170 DGN ee qaabka v8 waxaanan u baahannahay inaan u gudbino qaabka dwg si ay u shaqeyn karaan dadka isticmaala barnaamijyada GIS ee aan taageersaneyn faylkan noocan ah.
Ma tixraacno hal fayl oo keliya, oo sida caadiga ah la sameeyo Furan / kaydka sida. Labada xaaladoodba, xal ayaa lagama maarmaan ah, isla markaana AutoDesk iyo Bentley labaduba way leeyihiin, inkastoo xaalado kala duwan:
Tilmaamahan wuxuu ka yimaadaa nooc kasta oo Microstation ah, Waxaa laga soo saaraa menu sare:
Dhaqdhaqaaqa / Qalabaynta qaybaha
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad doorato jidka caga for files la gediyay ah. icon afraad waxaa loo isticmaalaa in lagu daro files aad rabto in aad loogu badalo, waxa xiiso leh in aan keliya baa la samayn karaa si loogu badalo files DGN laakiin mid ka mid ah qaabab ay taageerto: DGN v7, v8 DGN, billabo, DXF, IGES (.igs), STEP ( STP) .cgm, .x_t, .sat, .stl iyo diinta ka siman waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah qaabab kuwaas.
Kadibna hawsha ayaa la badbaadin karaa markale mar kale. Dhaqan ahaan, marka laga hadlayo qaddiyadaha qaar ee qorshaysan ee jadwalka si loo dayactiro kasta oo lagu sameeyo dhoofinta khariidada loo yaqaan "directory publishing web" kaas oo ku jira faylasha qadar gaar ah. Dabcan, haddii aadan haysan Microstation, geeddi-socodkan waxaa lagu fulin karaa nuqul tijaabo ah oo kuu ogolaanaya inaad shaqeyso daqiiqado 15, wakhti ku filan oo lagu fuliyo habkan.
Marka laga hadlayo AutoDesk, waxay bixisay qalab bilaash ah oo la yiraahdo View View. Xaaladdan waxaan isticmaalayaa nuqulkii la sii daayay ee AutoCAD 2012, marka lagu rakibayo, sida nooc kasta oo ka mid ah codsiyada AutoDesk 2012 .NET Naqshada Shaqada 4.
Farsamoyinnadu waxay la mid yihiin dhinacyo kala duwan oo loo adeegsado Batch Converter of Microstation marka la eego badbaadinta liiska shaqooyinka, maareynta faylasha tixraaca iyo la nadiifiyey xogta aan loo baahnayn. diinta Tani waa kaliya ee heerka of files billabo, ogolaanaya transformations of qaabab kala duwan 5 ayaa waxa soo maray ka version 97 ah: R14, 200, 2004, 2007 iyo 2010.
Labada xalba waxay xalliyaan dhismayaasha bilawga ah ee loogu talagalay dadka isticmaala badeecadaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kala duwanaansho weyn:
Xaaladda Bentley, waxay leedahay faa'iido ay u leedahay inay u rogto faylasha qaabab kala duwan, oo ka mid ah dwg, dgn iyo dxf si ballaadhan loo isticmaalo. Dabcan, version wuxuu u muuqdaa inuu ku saleysan yahay mid guud oo laga akhrisan karo nooc kasta oo ka mid ah AutoCAD, oo ay ku jiraan 200 iyo barnaamijyo GIS oo aqoonsanaya in version.
Waxaa jira faa'iido darro in la shaqeeyo faylasha dwg 2010 waa in lagu sameeyaa Microstation V8i, qoraaladii hore oo kaliya waxay aqoonsadaan qaababka ilaa dwg 2007. Khasaare kale ayaa ah in qaabsocodkani uu u baahan yahay in uu haysto version Microstation, inkastoo ay noqon kartaa tijaabo leh ikhtiyaari ah daqiiqado 15.
Kiiska AutoDesk, wuxuu leeyahay faa'iidada inuu awood u leeyahay in uu u beddelo qaabab kala duwan iyo sidoo kale in uu yahay qalab bilaash ah.
Dhibaatada aan loo samayn karin qaabab kale, xitaa xitaa haddii ay dhacdo. Sidoo kale, in doorashadan aan lagu darin AutoCAD, sidaas darteed hababka barnaamijka ee codsiga gudahiisa waa mid aad u adag, taas oo sahlan Microstation.
Post Previous«Previous Waa maxay sababta ay dumarku u adagtahay in ay hurdaan
Post Next Tool for barbar codes ama faylNext »
3 Jawaab in "Ku beddel faylasha si aad u hesho" AutoCAD / Microstation cajiinka "
Dabcan, markaad ku darto tixraaca wuxuu ku siinayaa xalkaas.
Raquel isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa su'aal, doorasho noocee ah ayaan ku hayaa si aan u ilaaliyo meesha ay ku tiirsan yihiin tixraacyada?
Cusboonaysiinta: AutoCAD 2012 waxay keenaysaa shaqo cusub oo loo yaqaan 'dwg Connect', kaas oo kuu oggolaanaya inaad faylasha ugu beddesho tiro badan.